Radio Don Bosco - Masindahy Paulin d'Aquilée
Ny taona 787 io Amperora io no nanendry azy ho eveka tao Aquilée tao Frioul, Italia. Nantsoin'i Charlemagne hoe "gammaticae magister" izy, izany hoe mana-pahaizna momba ny fitsipi-pitenenana. Ny taona 782 izy niaraka tamin'i Alcuin dia isan'ireo tao anatin'ireo manam-pahaizana tao an-dapa ka tamin'izany fotoana izany i Paulin no nitondra ny anaram-bosotra hoe "Timothée".
Tamin'ny fotoana nitondran'i Paulin ny Fiangonana dia niezaka nanohitra ny fampianaran-diso nataon'ireo "adoptianistes" izy, izay nilaza fa i Jesoa Kristy dia zanaka natsangan'Andriamanitra. Teo ihany koa ny fotoan-tsarotra nolalovan'ny Fiangonana teo amin'ny fifandimbiasam-panjakan'ny Lombards sy ny Francs.
Nandray anjara tamin'ny Konsilim-paritra tao Aix-la-Chapelle ny taona 789 i Paulin. Toa izany koa ny Konsily tao Ratisbonne ny taona 792 ary ny tao Francfort ny taona 794. Maro ireo asa-sorany toy ireo "Traités théologiques", nahitana ohatra ny boky "Libellus Sacrosyllabus" sy ny hoe "Contra Felicem" nanoherany ireo adoptianistes. Nisy ihany koa boky nosoratany ho an'i Eric de Frioul tamin'ny tao 797 mitondra ny lohateny hoe "Liber exhortationis". Nanoratra tononkalo maro ihany koa i Paulin. Tao ny "Regula fidei", fiekem-pinoana nataony manokana io. Hafa koa ny "Versus de Herico duce", hira noforonina hanomezam-boninahitra an'i Eric de Frioul tamin'ny fandevenana azy. Nisy ihany koa ilay antsoina hoe "Versus de Lazaro", kalo momba ny fitsanganan-ko velon'i Lazare. Noho io asan'i Paulin ara-panahy sy ara-kolontsaina io no nahatonga ny olona hiantso azy hoe hazavan'ny finoana an'i Kristy.